सि.एमको स्मृतिमा क्रिकेट प्रतियोगिता हुने - Pradesh Dainik
सि.एमको स्मृतिमा क्रिकेट प्रतियोगिता हुने
सोमबार, बैशाख ३०, २०७६ , प्रदेश दैनिक
मोरङको पथरीशनिश्चरे १ का सि.एम अन्दङ्वाको स्मृतिमा प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगीता हुने भएको छ । सोमाबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सि.एमको स्मृतिमा हुने क्रिकेट प्रतियोगीताका बारेमा जानकारी दिइएको हो ।
खेलको आयोजना पथरीशनिश्चरे क्रिकेट क्लवले सो खेलको आयोजना गर्ने भएको छ । खेलको मुख्य प्रायोजकका रुपमा सि.एमले स्थापना गरेको एभरेष्ट अंग्रेजी आवासीय मा.बि रहेको छ । खेलमा टिका फेन्सी स्टोर,पथरीशनिश्चरे नगरपालीका, ट्रु भ्याली र वल्र्डलिंक प्रायोजकको रुपमा रहने आयोजकले जनाएको छ ।
खेल जेष्ठ ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म पथरी रंगशालामा सम्पन्न हुने छ । खेलमा प्रदेश १ का १६ वटा टिमले सहभागीता जनाउने जानकारी दिइएको छ । प्रतियोगिताको बिजेताले ५५ हजार ५ सय ५५ र उप बिजेताले ३३ हजार ३ सय ३३ का साथ ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन् । खेलमा बेस्ट बलर, बेस्ट ब्याट्सम्यान, मेन आफ द सिरिज ले २ हजार ५ सय ५५ का दरले पाउनेछन् ।
प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचले नगद १ हजार १ सय ११ का साथ ट्रफि प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगितामा करिब ३ लाख ८० हजार रुपैया खर्च हुने अनुमान आयोजकले गरेको छ । यस अघि पनि एभरेष्टले सि.एमको सम्झनामा सि. एम कन्दङ्वा राष्ट्रिय विशिष्ट प्रतिभा सम्मान र सि. एम कन्दङ्वा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानद्वारा २ जना गीतकार तथा साहित्यकारलाई सम्मान गरिसकेको छ ।
प्रतियोगिताको अवधीभर दर्शकले वल्र्डलिंकको फ्रि वाईफाईको पनि मजा लिने पाउने छन् ।